News | Nepal Communist party
News | Tag: Nepal Communist party
दुई अध्यक्षले कसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्नेमा नेकपाको नीतिगत अन्योल
काठमाडौं । नेकपामा दुई अध्यक्षको अधिकार क्षेत्र बराबर हुने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यविधि टुंगो नलाग्दा बैठकको अध्यक्षता आलोपालो हुन सकेको छैन।
नेकपाभित्रबाटै पहिलोपटक सरकारको आलोचना
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकमा सरकारका कामको आलोचना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारका निर्णय र कामबारे प्रश्न उठाइरहेका वेला नेकपाभित्रबाटै पहिलोपटक आलोचना भएको छ ।
नेकपा सचिवालयको बैठक शुरु
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको तेस्रो बैठक पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा अहिले केही बेरपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु भएको छ । पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार पार्टी स्थायी समितिको बिहीबार बस्ने बैठकको तयारीका लागि ९ बजे सचिवालय बैठक बसेको हो ।
काठमाडौं । पार्टी सदस्यबाट उठ्ने लेभीबाटै सत्तारुढ दल नेकपाले मासिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने देखिएको छ ।
डा देवकोटाप्रति राष्ट्र सँधै ऋणी: नेकपा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले न्युरो साइन्सका विख्यात चिकित्सक प्रा. डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधनबाट पार्टी स्तब्ध भएको जनाएको छ। डा देवकोटाले न्युरो सर्जरीका क्षेत्रमा प्राप्त गरेको उचाइ कुनै एक व्यक्तिका लागि नभएर सिंगो नेपाल र नेपालीले गर्व गर्न लायक रहेको सो पार्टीका अध्यक्ष एवंम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
पुराना वामपन्थी नेता वामपन्थी नेता कुञ्जवीर लामाको आज अन्त्येष्टि गरिने
बर्दिवास । महोत्तरी जिल्लाका पुराना वामपन्थी नेता कुञ्जवीर लामाको ९३ वर्षको उमेरमा शनिबार दिउँसो निधन भएको छ । जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापकमध्येकै एक रहेका लामाको बर्दिवास–१३, बिजलपुरास्थित आफ्नै घरमा निधन भएको हो । लामा पछिल्ला केही महिनायता दम र मधुमेहले ग्रसित रहँदै आएका थिए । विसं १९८२ मा बिजलपुरामै जन्मनुभएका लामा जिल्लामा २००८ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो जिल्ला संगठन कमिटी गठन हुँदा सदस्य थिए ।
सरकारको कामले जनस्तरमा राम्रो प्रभाव परेको निष्कर्ष !
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको कामले जनस्तरमा राम्रो प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी एकता प्रक्रियाले जनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुको साथै सरकारको कामले जनस्तरमा नयाँ आशा जगाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेकपाको साधारण सदस्यले २० र संगठित सदस्यले १०० रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा साधारण र संगठित सदस्य हुने भएको छ । अब साधारण सदस्यले प्रत्येक महिना २० र संगठित सदस्यले प्रत्येक महिना सय रुपैयाँ पार्टीलाई लेबी बुझाउनुपर्नेछ ।
संसदको १५ समिति सभापतिमा नेकपाको नेतृत्व
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गठन हुने १५ वटा समितिका सभापति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै नेतृत्व गर्न पाउने भएको छ ।